Mibvunzo - FAQ - Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co, ltd.
Tube yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina
Dual Chamber chubhu
Bhodhoro yekuzadza uye capping muchina
Uri kutengesa kambani kana mugadziri?
Isu tiri fekitori, michina yese inoitwa neyedu uye isu tinogona kupa gadzirisa sevhisi maererano nezvaunoda.
Ndeipi fekitori yako nzvimbo? Ndingashanyira sei ikoko?
Fekitori yedu iri muShenzhen, China. Unogona kutishanyira nendege. Ingori maminetsi makumi maviri neshanu kubva kufekitori yedu kuenda kuShenzhen International Airport. Tinogona kuronga mota kuti ikusimudze ipapo.
Rakareba sei nguva yako yekuendesa?
Kazhinji iwo mazuva 3-5 kana nhumbi dziripo. kana iwo mazuva gumi nemashanu kusvika makumi mashanu nemashanu kana zvinhu zvisiri mudura, zvichibva pauwandu uye zvaunoda. Tichaiendesa nenguva sezvo zuva ratakabvumirana mativi ese.
Ndingaite sei kuti ndiise muchina wangu kana wasvika?
Isu tinopa ekuisa mavhidhiyo uye tutorials, kana isu zvakare tinogona kuronga vhidhiyo kufona ASAS muchina wakagadzirira mune yako saiti kukudzidzisa iwe maitiro ekumhanyisa michina. Uye kana uchida, isu tinogona zvakare kutumira mainjiniya kudivi rako kuti akubatsire iwe kuyedza uye kudzidzisa ako matekinoroji.
Ko kana muchina ukatadza panguva yekushandisa?
Zvigadzirwa zvedu zvichanyatso kuongororwa uye kuchengetedzwa zvisati zvasvitswa, uye isu tinopa mirairo chaiyo nemavhidhiyo ekushandisa zvigadzirwa; Uye zvakare, zvigadzirwa zvedu zvinotsigira hupenyu hwewarandi sevhisi, kana paine chero mibvunzo panguva yekushandisa kwechigadzirwa, ndokumbira ubvunze vashandi vedu.
Ndeipi vimbiso kana tikatenga kubva kwauri?
Yese michina yakarairwa kubva kwatiri ichapa gore rimwe vimbiso kubva pazuva rekutakura. Kana paine chero hukuru zvikamu zvakaputswa mukati mevimbiso uye zvisina kukonzerwa nekuita zvisirizvo saka tinopa zvikamu zvitsva zvemahara.
Ndeupi muripo waunogamuchira?
Isu tinowanzoshandisa T / T kana L / C pakuona, uye tinogona kutaurirana nzira yekubhadhara.
1. Kupa rutsigiro rwehunyanzvi.
2.Tumira chigadzirwa katalog uye oparesheni vhidhiyo.
3. Kana iwe uine chero mubvunzo PLS taura nesu online kana titumire email, tinovimbisa isu tinokupa iwe mhinduro panguva yekutanga!
4. Kufona wega kana kushanya kwefekitori kunogamuchirwa.
1. Isu tinovimbisa kutendeseka uye kusingagumi, mufaro wedu kukushandirai seanotenga mazano.
2. Isu tinovimbisa kubata nguva, mhando uye huwandu zvakanyatso kuita zviga zvechibvumirano.
3. Isu tinotarisa kukupa iwe-imwe-nhanho mhinduro pane zvako zvaunoda
Mushure mekutengesa sevhisi:
1. Ndekupi kwekutenga zvigadzirwa zvedu zvemakore 1 warandi uye hupenyu hwakareba hwekuchengetedza.
2. Maawa makumi maviri nemana runhare runhare.
3. Iko huru hombe yezvikamu uye zvikamu, zviri nyore-zvakapfeka zvikamu.
4. Injiniya anogona kusevha pasuo nesuo.
Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co, Ltd.